मधुमेह कन्ट्रोल गर्ने प्राकृतिक तरिका. Ways to Lower Blood Sugar Levels Naturally
मधुमेह रोग, ब्लड सुगर वा चिनीरोग Diabetes : रगतमा गुलियो पदार्थ बढी हुँदा शरीरले उक्त गुलियो पदार्थलाइ पचाउन नसकेर मधुमेह (डायबेटिज) रोग हुने गर्दछ। ग्लुकोज को मात्रा बढ्दछ , शरीरमा ग्लुकोज को मात्रा खपत हुन पाउँदैन र ग्लुकोज शरीर भित्र अनियन्त्रित भै मधुमेह रोग लाग्ने गर्दछ ।
हामीले खाने प्रत्येक खानाबाट पाइने कर्बोहाइड्रेडमा ग्लुकोजको मात्रा बढी मात्रामा हुन्छ. यसबाट शरीर ले ग्लुकोज प्राप्त गर्दछ तर उक्त ग्लुकोज खपत हुन नपाए पछि शरीरमा ग्लुकोज मात्र बढी हुन जान्छ. शरीरले ग्लुकोजलाई नियन्त्रणमा राख्न नसके पछि ग्लुकोज अनियन्त्रित भै मधुमेह रोग लाग्दछ।
यसलाई सामान्य तरिकाले बुझ्ने हो भने रगतमा गुलियो पदार्थ बढी हुँदा शरीरले उक्त गुलियो पदार्थलाइ पचाउन नसकेर मधुमेह (डायबेटिज) रोग हुने हो ।
रगतमा भएको गुलियो पदार्थ (ग्लुकोज) लाई नियन्त्रण गर्ने इन्सुलिन हर्मोन हुन्छ। इन्सुलिन हर्मोन हाम्रो शरीरको Pancreas ग्रन्थि ले उत्पादन गर्छ। खाएको खानामा पाइने कार्बोहाइड्रेडबाट ग्लुकोजलाई प्रयोग गरी शरीरमा इनर्जी बढाउँन र धेरै इनर्जी युक्त भए फ्याट (बोसो) बनाएर पछिको प्रयोगको लागि जम्मा गर्ने कार्य इन्सुलिन हर्मोनले गर्दछ.
यदि शरीरमा pancreas ग्रन्थिबाट इन्सुलिन हर्मोन उत्पादनमा कमि आयो भने शरीरको ग्लुकोजलाई कन्ट्रोल गर्न इन्सुलिन प्रयाप्त हुन सक्दैन र मधुमेह हुने गर्छ.
दैनिक व्यायाम गर्ने वा अन्य कुनै पनि शरीरलाइ व्यायाम हुने काम गर्नु पर्दछ। जब दिनहुँ शारीरिक व्यायाम गरिन्छ तब शरीरको तौल घट्न सुरु हुन्छ र इन्सुलिन हर्मोनको उत्पादनमा बृद्दि हुन जान्छ। इन्सुलिनको बृद्दि भए पछि शरीरमा भएको ग्लुकोज अर्थात् सुगरको खपतमा ब्रिद्दि हुन जान्छ।